Madaxda Sare ee Dalka Somalia oo Soo Faragalisay Khilaafka Wasiir Xoosh Iyo Xildhibaanada
Kulamo Gooni gooni ah oo xal looga gaarayo mooshinka ka yaala Wasiirka Dastuurka Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil ayaa xalay ilaa Saacadihii la soo dhaafay waxa uu ka socday Magaalada Muqdisho.
Kulamadaan ayaa waxaa qeyb ka ah madaxda ugu sareysa dalka kadib markii uu cirka isku shareeraray khilaafka u dhaxeeya Xildhibaanada iyo Wasiir Xoosh.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo,oo soo dhexgalay khilaafkaan ayaa xalay kulan la qaatay qaar ka mid ah Xildhibaanada Mooshinka ka gudbiyay Wasiirka ayaa waxa ay weli ku adkeysanayaan in ay la xisaab tamayaan Wasiirka islamarkaana Go’aankooda aysan dib uga laabaneyn.
Arinta cirka u kicisay xiisada Wasiir Xoosh iyo Xildhibaanada ayaa ah in Barta uu ku leeyahay Twetter-ka uu soo dhigayay hadalo xanaf ah.
Qodobka 60’aad farqadiisa C,ee Dastuurka Soomaaliya ayaa cadeynaya in Xildhibaanadu ay u yeeri karaan Ra’iisul Wasaaraha iyo Golihiisa Wasiirada iyo dhamaan Guddiyada Xukuumadda si ay ula xisaabtamaan.
Shalay ayaa lagu balansanaa in uu Baarlamaanka Soomaaliya uu hortago Wasiir Xoosh in kastoo uu Goobjoog ahaa Xarunta Golaha Shacabka ayaa hadana kulanka Baarlamaanka waxa uu u furmi waayay Kooram la’aan,si ay Go,aan uga gaaraan dib u eegis lagu sameeyo xilheyntiisa.